လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ3နှစ်ပေါင်း4months ago #292
ဟယ်လို! တဖန်ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ငါအဲယားဘတ်စ် A380 ချင်ပေမယ့် (payware နှင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ) သူတို့ထဲကအတော်များများရှိပါတယ်။ ငါရသင့်သောတဦးတည်းကိုသိရန်လိုသည်။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးဒါဟာကောင်းပါတယ်အဖြစ် payware သို့မဟုတ်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။
ငါပြီးသားဤစာမျက်နှာတွင်ဖြစ်သည့်တဦးတည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်နေဆဲကြောင်းလေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ သငျသညျကထုံးစံ liveries add နိုင်သလား?
အဲယားဘတ်စ် A380-800 VC ကို
link ကို: www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/560
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ: CPU: AMD Ryzen71700X @ 3.9GHz | Motherboard: ASUS Prime X370 Pro | RAM ကို: 16MHz @ G ကိုကျွမ်းကျင်မှု Ripjaws V ကို 3200GB 2933MHz @ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်: ASUS GeForce GTX 1070 dual | သိုလှောင်မှု - Samsung 850 EVO 250GB SSD + အနောက်တိုင်းဒီဂျစ်တယ် 1TB WD အပြာရောင် HDD | PSU: EVGA စူပါနိုဗာ 750 G2 750W | OS: Windows 10
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် JanneAir15.
လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ3နှစ်ပေါင်း4months ago #293
ငါသညျလညျးတစျခုကိုအသုံးပြုပြီးတာပါ, ဒါမှာအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါကပို liveries install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပေမယ့်တချို့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတစ်ခုခုမှာမှားယှငျးခဲ့ ... အလုပ်လုပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။
လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ3နှစ်ပေါင်း4months ago #330
ငါသညျလညျးတစျခုကိုအသုံးပြုပြီးတာပါ, ဒါမှာအားလုံးမဟုတ်ပါ: Dariussssss ရေးသားခဲ့သည်။ ငါကပို liveries install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပေမယ့်တချို့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတစ်ခုခုမှာမှားယှငျးခဲ့ ... အလုပ်လုပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။
သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာ aircraft.cfg file ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့တာလဲ
လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ3နှစ်ပေါင်း4months ago #332
ငါလုပ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲ, အ installed livery အဘယ်ကြောင့်မသိရပါဘူး ... တက်ဖေါ်ပြခြင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။
လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ3နှစ်ပေါင်း4months ago #334
ငါဘာကြောင့်လဲသိထင်ပါတယ်။ အဲဒီလေယာဉ် FS9 ဘို့မူလကဖြစ်ပါတယ်။ သင်လေယာဉ်အဘို့အညာဘက် livery ရခဲ့သလား ငါ Project မှအဲယားဘတ်စ်စာမျက်နှာဖွင့်ကြည့် A380 FS9 ဘို့လည်းမရှိ (အတူတူပင်လေယာဉ်ဤစာမျက်နှာတွင်အဖြစ်ဒါပေမယ့်အဘို့ပြုပြင်ထားသောရဲ့ FSX) ဒါကိုသင်တို့အားငါ liveries စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရလုပ်ဖို့ရှိပါသောအရာကိုသေချာမပေါ့။ ငါ liveries အလုပ်လုပ်ရတစ်ခုခုလုပ်, ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြောပြရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ3နှစ်ပေါင်း4months ago #338
အဲဒါကိုမျှော်လင့်။ ဒီနေရာမှာတူညီ, ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ3နှစ်ပေါင်း4months ago #339
ဒီတော့ဒီမှာရှိတယ်။ ငါ livery ကို 'ကျွန်ုပ်တို့၏' 'A380 ထဲသို့ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။
လုပ်ရန်နည်းလမ်းမှာ ... ပထမ ဦး စွာသင်တပ်ဆင်လိုသည့် A380 texture ကိုသာရှာဖွေပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ သူတို့ကိုများစွာသောသင် Avsim မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ texture folder ကို PA A380 ဖိုလ်ဒါထဲကိုထည့်ပြီးလေယာဉ် .cfg ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးတည်းဖြတ်ပါ။ ၄ င်း texture သည်သင်၏ sim နှင့်လိုက်ဖက်ကြောင်းသေချာစေပါ၊ FSX.
လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ3နှစ်ပေါင်း4months ago #342
လေယာဉ်ပျံအကြံပြုချက်များ3နှစ်ပေါင်း4months ago #343
JanneAir15 wrote: ငါဘာကြောင့်လဲသိထင်ပါတယ်။ အဲဒီလေယာဉ် FS9 ဘို့မူလကဖြစ်ပါတယ်။ သင်လေယာဉ်အဘို့အညာဘက် livery ရခဲ့သလား ငါ Project မှအဲယားဘတ်စ်စာမျက်နှာဖွင့်ကြည့် A380 FS9 ဘို့လည်းမရှိ (အတူတူပင်လေယာဉ်ဤစာမျက်နှာတွင်အဖြစ်ဒါပေမယ့်အဘို့ပြုပြင်ထားသောရဲ့ FSX) ဒါကိုသင်တို့အားငါ liveries စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရလုပ်ဖို့ရှိပါသောအရာကိုသေချာမပေါ့။ ငါ liveries အလုပ်လုပ်ရတစ်ခုခုလုပ်, ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြောပြရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
0.254 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်